karazana karazana atahorana ho an'ny fahasalamana - TELES RELAY
Hatramin'ny fananganana simika misy poizina ka mitombo ny risika amin'ny homamiadan'ny havokavoka, ny porofo farany dia milaza fa misy karazana fahandroana pose amin'ny fahasalamana. Inona no azontsika atao mba hisorohana azy ireo?
"Ny antony nivoahanay tamin'ny maha-olombelona dia satria nanomboka nahandro sakafo izahay", hoy i Jenna Macciochi. "Raha vao niasa amin'ny sakafo manta ihany izahay dia tsy maintsy nihinana tsy tapaka, satria ny vatantsika no nanahirana ny nalaina zezika tamin'ny sakafo manta."
manam-pahaizana efa ela no nanaiky miaraka amin'i Macciochi, izay mandinika ny fomba fifandraisan'ny sakafo sy ny fomba fiaina an'ny olona iray ao amin'ny University of Sussex. Raha ny marina dia misy porofo lehibe misy porofo manamarina fa ny fivoaran'ny olombelona dia mifandray amin'ny fampiasa amin'ny afo.
Rehefa nahandro sy nanodina ny sakafony ny razambentsika dia nanamora ny fitrandrahana kaloria sy tavy, izay nanampy hanitatra ny elanelana misy eo amin'ny habetsaky ny angovo ilaina handevon-kanina ny sakafo sy ny habetsany. nalaina. Midika ihany koa izany fa tsy maintsy mitsiky kely izahay.
We petsy izany ireto fahaizana mahandro ireto dia tsy nanampy tamin'ny fampihenana ny haben'ny valanoranay ihany, fa midika koa izany fa afaka mampivelatra valan-javaboary lehibe kokoa isika - ary avelantsika ny hetsika neural (mahery vaika) izay niaraka tamin'izy ireo. Ny fandrahoan-tsakafo koa dia mamono ny maro amin'ireo bakteria mety manimba izay mety hitombo ao ary amin'ny sakafontsika, manampy amin'ny fiarovana antsika amin'ny fanafihan'ny poizina.
Na izany aza, na dia eo aza ny tombony azo avy amin'ny fandrahoan-tsakafo, azo atao ve ny manamboatra ny sakafo amin'ny hafanana avo dia miteraka loza mitatao amin'ny fahasalamana?
Miaraka amin'ny firongatry ny sakafom-boankazo ary ny fifindrana amin'ireo fomba fahandro mahavariana amin'ny ankapobeny, ny mpahay siansa manerana an'izao tontolo izao dia nametraka sakafo mafana ao an-toerana.
Acrylamide: mampidi-doza ny homamiadana tafahoatra
Tsy ny fomba fahandro rehetra no noforonina mitovy rehefa manomana lovia. Ary ho an'ny karazana fandrahoan-tsakafo sasany - sahala amin'ireo izay mampiasa hafanana be loatra - ny karazan-tsakafo hohanina dia mitondra fiovana lehibe.
Ho an'ny sakafo starchy manokana, ny acrylamide dia iray amin'ireo risika izay namoahan'ny Agency Standards Agency (FSA) any Angletera. Ny simika dia zatra ampiasaina amin'ny famolavolana taratasy, fandokoana sy ny plastika, fa namboarina koa izy io amin'ny sakafo rehefa akatsaho, na andraso na nohosorana amin'ny hafanana avo be mandritra ny fotoana maharitra.
Acrylamide dia heverina fa mety hampidi-doza ho an'ny homamiadana, na dia hita aza fa avy amin'ny biby ny ankamaroan'ny porofo ankehitriny
Ny otrikaina misy otrikaina, toy ny ovy sy ny legioma, ny mofomamy, ny voamadinika, ny kafe, ny mofomamy, ary ny mofomamy, dia saro-pady tokoa, ary ny fihetsika dia azo tsikaritr'izy ireo rehefa manomboka ny starch ao. hamaizina, volontany na may. .
Acrylamide dia nianatra fa mety hitera-doza mety ho voan'ny homamiadana , na dia ny ankamaroan'ny porofo ankehitriny manohana rohy dia avy amin'ny biby. Raha ny zava-misy, ny Macciochi, ny mpitson-tsakafo ary ny masoivoho ara-tsakafo dia mino fa tsara kokoa ny hisorohana ny fisakafoanana mihinana avo be amin'ny atiny acrylamide.
Heverina fa nanomboka nahandro sakafo ny olona an-tapitrisany taona lasa izay (Sary: Sary: Getty Sary)
"Ny ankamaroan'ny fitsapana dia atao amin'ny laboratoara miaraka amin'ny biby, [saingy] heverinay fa ny fitrandrahana acrylamide dia mety hiteraka kansera ao amin'ny olona, ​​koa tokony ho fantatry ny olona ho fatra-pitandremana io ary mieritreritra ihany koa ny momba ireo sakafo nokarakaraina. fa izy ireo mividy izay mety ho be dia be ny acrylamide noho ny fanodinana indostria, ”hoy izy nanampy.
Mba hialana amin'ny fatra acrylamides avo be, ny FSA dia manoro hevitra mikendry loko volamena iray rehefa mahandro sy manala ny vata fampangatsiahana ny ovy raha tokony hahandro amin'ny rano mafana izy ireo (mamontsina ny ovy dia mamoaka siramamy, mifangaro amin'ny asidra amina acrylamide mandritra ny fandrahoan-tsakafo). Amin'ny ankapobeny, ny hevitra dia ny fisorohana ny fihoaran'ny fanafody ireo akora ireo, hisorohana ny fananganana acrylamide.
Na izany aza, tsy mifarana amin'ny grill ilay loza.
"Ny zavatra toy ny acrylamide amin'ny sakafo dia iray amin'ireo loza maro amin'ny sakafo maoderina", hoy ny fampitandremana an'i Macciochi, "ka tsy hiteraka tratran'ny homamiadana irery io fa raha misy olona manana tsy fahampian-tsakafo dia zavatra azontsika ivoahana mba hampihenana ny loza. "
Ny fahandroan'ny havokavoka sy ny homamiadan'ny havokavoka
Ny vokatry ny fandrahoan-tsakafo dia tsy avy amin'ny sakafo mihinana ihany, fa amin'ny rivotra koa. Voalohany, ny fatana dia antony lehibe mahatonga aretina amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana. Rehefa ampiasaina ny solika mavesatra toa ny kitay, ny fako sy ny saribao dia mivoaka ny setroka ao anaty. Araka ny filazan'ny World Health Organization, dia izany tompon'andraikitra hatramin'ny hatramin'ny 3,8 tapitrisa maty teo aloha isan-taona .
Misy porofo fa ny fahandro ao anaty trano tsy misy fitrandrahana mety dia mampitombo ny risika amin'ny fihanaky ny homamiadan'ny havokavoka (Credit: Getty Sary)
Saingy ny fanafody sasany ao anaty sakafo amboarintsika dia mety hiteraka fandotoana rivotra anatiny.
Une fandalinana momba 2017, navoaka tao amin'ny Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, nahita porofo fa ny fampahafantarana ny fangaro amin'ny menaka mahandro dia mampitombo ny risika ny homamiadan'ny havokavoka.
Ny mpikaroka dia nanadihady fanadihadiana 23 momba ny raharaha homamiadana 9411 any Chine ary nahita fa tsy ny vehivavy mahandro tsy mahazo miditra amin'ny fitrandrahana tsara any an-dakozia no misy atahorana ny homamiadan'ny havokavoka, fa koa ireo fomba samy hafa samy nisy fiantraikany ny fahandroana. Ohatra, ny sakafo voaendy dia nampitombo ny risika amin'ny homamiadan'ny havokavoka, tsy toy ny sakafo natsiro.
Any Taiwan, vondrona mpikaroka iray dia nahita fa ny setra-menaka fandrahoan-tsakafo dia misy aldehydes, karazana simika iray antsoina hoe carcinogen
Ny hafa fampianarana koa dia nanome porofo fa ny fampidirana ny menaka fandrobohana menaka mandritra ny fitondrana vohoka dia mety hisy fiantraikany amin'ny zaza vao teraka, mampihena ny lanjan'ny fahaterahany.
Ao amin'ny 2017, Manana ny mpikaroka any Taiwan mampitaha ny habetsaky ny aldehydes - kilasy mivelatra mahery vaika, izay misy poizina amin'ny olombelona - vokarin'ny fomba fahandro samihafa. Ao amin'ny taratasy dia nanoro hevitra ny mpanoratra fa ny setroka menaka mavokely sy ny fomba toy ny frying and frying pan dia misy risika avo kokoa noho ny famokarana aldehydes bebe kokoa, raha toa kosa ny menaka mandavanta ao anaty tsy matavy, toy ny l menaka palmie na menaka fanosihosena, ary koa ny fomba fahandro malefaka toy ny fandrahoan-tsokosoko dia tsy miteraka vokatra na karazana maro izay heverina fa manimba.
Nofoana hena sy diabeta
Ny mpihinana hena dia mety mila miverina mandinika ny fomba fahandroana hena sy ny firy azy ireo no anana. Different fampianarana dia nampiseho fa ny fomba fandoroana afo mandrehitra hena mena, indrindra ny fikosoham-bary sy ny barbecuing, ary koa ny teknika avo lenta, toy ny fanaovana mofo, dia afaka mampitombo ny mety hisian'ny diabeta eo amin'ny mpanjifa hena matetika. mena any Etazonia - na dia tsy fantatra aza ny antony nahitana ny fiantraikany teo amin'ny vehivavy fa tsy tamin'ny lehilahy.
Na dia misy atahorana aza ny karazana fahandroana sasany, manan-danja izy ireo amin'ny fanampiana antsika hampihenana ny angovo azontsika avy amin'ny sakafo hohanintsika (Sary: Sary: Getty Sary)
iray hafa mandalina a nanambara fifamatorana mitovitovitra eo amin'ny fandoroana afo tsy miovaova na fomba fitsaboana mahamay sy ny diabeta karazana 2 amin'ny mpihinana hena mena, akoho sy trondro, na lahy na vavy.
Zava-dehibe ny manamarika fa tsy misy amin'ireo fanadihadiana ireo mifehy ny fomba fiaina toy ny fanatanjahan-tena na lafiny hafa amin'ny sakafon'ny olona iray, ao anatin'izany ny habetsahan'ny siramamy aloa. noho izany dia azo atao fa izy ireo no niandohan'ilay rohy. Na izany aza, ny fomba fahandro hafa natolotry ny mpikaroka dia ahitana ny fandrahoana sy ny fofona, izay toa tsy misy ifandraisany amin'ny loza ateraky ny diabeta.
Nandritra ny taonjato lasa izay, ny teknika fandrahoan-tsakafo dia nivoatra sy niovaova, ary ny fandrahoan-tsakafo dia nanomboka nifindra tamin'ny loharano mafana kokoa. Microwaves, hobs elektronika ary toasters dia hita any amin'ny trano rehetra, izay manome safidy hafa amin'ny lelafo.
Nihabetsaka ny siansa, ny siansa dia nanondro fa ny microwave dia fomba mahasalama mahandro kokoa - miankina amin'ny zavatra fahandroinao ao.
Ohatra, fanadihadiana vao haingana avy any Espaina no nahita fa iray amin'ireo fomba mahasoa indrindra mahandro sakafo ny holatra dia ao amin'ny microwave. Io fomba io dia mampitombo ny haavon'ny antioxidant - sôkôla izay manampy miaro ny sela amin'ny fahasimbana. Na izany aza, ny holatra mangotraka na menaka dia mampihena ny atiny antioxidant.
Raha ny marina, preuves Ny mpahay siansa dia mampiseho fa ny teknika tsara indrindra amin'ny fitahirizana otrikaina sy otrikaina rehefa mahandro legioma dia ny fampiasana fotoana fandrahoan-tsakafo fohy ary ampiasao kely araka izay tratra. Midika izany fa ny fampiasana microwave dia fomba fahandro tsara satria ny zavatra tsara vitsivitsy dia very - tsy toy ny mangotraka any amin'ny fanjonoana.
Ny karazan-tsolika sasany, toy ny fanolanana sy palma dia inoana fa mahasalama kokoa amin'ny fandrahoana (Credit: Getty Sary)
“Tsara ihany koa ny mifoka rivotra fa tsy mahandro legioma, na inona na inona atoronao amin'ny hafanana amin'ny fotoana lava dia toa ny olana be indrindra, mampihena ny toetra mahavelona na mamokatra vitsivitsy amin'ireny sanganasa manahirana ireny, toy ny l 'acrylamide', hoy ny fanazavan'i Macciochi.
Olana iray hafa amin'ny fahandroana, na fomba fahandro hafa nahitana menaka, dia izay mitranga rehefa misy ny fatina sasany. Raha ny fandehany fa ny hafanana dia mety hiteraka solika ny lozika, ka rehefa mahandro azy ireo amin'ny mari-pana ianao, dia mety hiafara amin'ny menaka hafa tsy mitovy amin'ilay nombohanao.
Tsy ny menaka rehetra no mitovy fiovana amin'ireo fanovana ireo. Ohatra, ny menaka oliva dia misy "setroka somary ambany" raha ampitahaina amin'ny tavy feno toy ny menaka voanio. Io ny mari-pana manomboka miova - rehefa manomboka manapotsitra sy manary ny sasantsasany mahasoa, toy ny anti-inflammatory oleocanthal. Fotoana io manomboka manomboka mamokatra fiatra manimba, toy ny aldehida sasany. Macciochi dia manolotra ny menaka oliva mandritra ny ankamaroan'ny tanjona mahandro sakafo, noho ny fahasalamany amin'ny voalohany: tsy ho an'ny fandrahoan-indostrian'antoka na izay misy fotoana mahandro fahandro.
Na izany aza, na dia misy atahorana aza ny karazana fahandroana sasany, ny fisorohana ny sakafo fandrahoan-tsakafo dia manjary manimba zavatra bebe kokoa. A Fandinihana Alemanina momba ny olona manaraka sakafo ara-dalàna nandritra ny taona maro dia nanambara fa ny lehilahy dia lanjan'ny lanjany manodidina ny 9 kg (19 lb), raha ny vehivavy kosa very manodidina ny 12 kg (26 lb). Rehefa nifarana ny fandinihana dia misy ampahany lehibe tsy ampy lanja - ary ny ampahatelon'ny vehivavy dia nijanona fotoana maharitra. Ny mpanoratra dia namarana, tamin'ny tsy fahitan-tsiansa ara-tsiansa mahazatra, "ny sakafo manery tena henjana dia tsy azo soso-kevitra amin'ny fotoana maharitra".
"Farany, ny fahandro hena sy karbôgria dia fomba tsara hanamafisana ny fisian'ny otrikaina ao amin'ireto sakafo ireto fa tsy ny hihinanan-dry zareo azy", "hoy i Macciochi," satria alao an-tsaina ny ovy. dia sarotra be ny mahazo ireo otrikaina, tsy milaza akory hoe tsy mahafinaritra fotsiny. "
Toa teo amin'ny toerany daholo ny razambentsika.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.bbc.com/future/article/20200625-the-hidden-risks-of-cooking-your-food